အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားမလဲ? | Mycanvas
အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားမလဲ?
Self-efficacy ဟာ သင့်အားစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေခြင်းအပြင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သင့်ရဲ့ Self-efficacy ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲဆိုတာကို
အချက် (၁) – အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများ
အောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံများနဲ့ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများဟာ သင့်ရဲ့ Self-efficacy ကို မြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကလေးဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်ကလေးဘဝတုန်းက ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ချီးမွမ်းခံရဖူးသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့အပြုအမူ၊ ကြင်နာတဲ့အပြုအမူကြောင့် လူအများကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေ ဘယ်လိုပြောခဲ့ဖူးသလဲ? ဒီလိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံအသေးလေးတွေကတောင်တစ်ဆင့် သင့်ရဲ့ Self-efficacy မြင့်မားစေဖို့အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ အခုပြောသွားတဲ့မေးခွန်းရဲ့သင်ဖြေတဲ့အဖြေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် အရာရာကို သင်လုပ်နိုင်မှာပါလို့ခံစားရစေပါတယ်။
အချက် (၂) – ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများ
Simulation Experience တွေမှတဆင့်လည်းသင့်ရဲ့ Self-efficacy ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောရုပ်ရှင်တွေနဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ သူရဲကောင်း(သို့မဟုတ်)သူရဲကောင်းအတွေ့အကြုံတွေကသင့်ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာပါတဲ့ ပျော်စရာစာသားလေးတွေ၊ motivate ဖြစ်စေတဲ့စာသားတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကတစ်ဆင့်ရရှိတဲ့ Message တွေက သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်စေပါတယ်။
အချက် (၃) – စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် သင့်လျော်သောပန်းတိုင်များ
ပထမဦးစွာသင်သည် လက်တွေ့ကျသောပန်းတိုင်များကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ သင့်အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ ဒါဟာသင့်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ Target မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဆိုတာက သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ Positive ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေ Positive ဖြစ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို သုံးခြင်းကသင့်အတွက်ပိုပြီး အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ‘အမှားများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း’ ကဲ့သို့သောရည်မှန်းချက်မျိုးက Negative ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာအမှားတွေကိုမရှောင်ပဲ ဖြစ်လာတဲ့အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး အကောင်းဘက်က ဖြည့်တွေးခြင်းက သင့်ရဲ့ Self-efficacy ကို ပိုမိုမြင့်မားစေပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ပြီးနောက်မှာတော့ အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့မြင်ကွင်းကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိုအခြေအနေကိုရောက်နေမလဲ၊ သင်ကိုဘယ်လိုပြောဆိုနေတဲ့အသံတွေကိုကြားနေမလဲ၊ သင်ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲဆိုတာမျိုး စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ကြည့်ပါ…